सतर्कता बढाऊ – Sajha Bisaunee
। ७ चैत्र २०७६, शुक्रबार ०८:४७ मा प्रकाशित
सिटामोल लिन आठ घण्टासम्म हिँड्नुपर्ने र स्वास्थ्यकर्मी भेट्न दिन जुर्नुपर्ने अवस्थाको वास्तविकताबीच कर्णालीवासीलाई अहिले अर्को कहर थपिएको छ, कोरोना । यसै पनि रोग र गरिबीले आक्रान्त कर्णाली प्रदेश कोरोनाका कारण थप चिन्तित देखिन थालेको छ । यदि कर्णालीका जिल्लाहरूमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिहाल्यो र माहामारीकै रूप लियो भने अवस्था के होला ? रोगलाग्दा एक चक्की औषधि नपाउने कर्णाली भित्रको कर्णालीका नागरिकले त्रास मान्नु स्वभाविकै छ । किनकी सामान्य असावधानीले फैलिने झाडापखालासमेत नियन्त्रण गर्न नसक्ने यहाँको विद्यमान स्वास्थ्य संरचनाले विश्वलाई नै त्रसित पारिरहेको कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था पक्कै छैन ।
सामान्य अवस्थामै स्वास्थ्यकर्मी र औषधि पु¥याउन मुस्किल भइरहेका बेला थपिएको कोरोना त्रासबाट प्रदेशवासीलाई मुक्त गर्न सरकार कति सफल होला ? महामारी नियन्त्रण गर्ने सामथ्र्य नभएकाले पनि सरकारको ध्यान सचेतना मै जानुपर्छ । जसले गर्दा नागरिकमा सावधानी बढ्नेछ । जुनसुकै संक्रमण भित्रिन नदिन अपनाउनुपर्ने सावधानी नै हो । संक्रमण भित्रिहाले उपचार कठिन हुने हाम्रोजस्तो प्रदेशमा सजकता अपनाउनु नै बढी बुद्धिमानी ठहरिन्छ पनि । यसतर्फ सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ, त्यो पनि समयमै । कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना संक्रमण भित्रिन नदिन दुईसाता अघिदेखि यसबारे तयारी थालेको छ । प्रदेश भित्रिने मुख्य नाकाहरूमा चेकजाँच उपकरणसहितका स्वास्थ्यकर्मी खटाइएको छ । ज्वरोलगायतका सामान्य चेकजाँच पछि यात्रुहरू गन्तव्यमा पठाउने गरिएको छ । विश्वलाई नै हल्लाइरहेको कोरोना भाइरस भित्रिन नदिन यो पूर्वतयारी मात्रै पर्याप्त होइन । एक जनाको असावधानी र कमजोर सतर्कताले यसले जटिल रूप लिन सक्छ ।
कर्णालीको स्वास्थ्य अवस्था सन्तोषजनक हुन नसके पनि सुधारोन्मुख छ । विगतका वर्षहरूजस्तो कमसेकम रुघाखोकी र झाडापखालाले थलिएर मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था छैन । स्वास्थ्य चौकी थपिएका छन् । पर्याप्त आवश्यक जनशक्ति त छैन तर प्रतिनिधिका रूपमा भए पनि स्वास्थ्यकर्मी स्वास्थ्य संस्थामा भेटिन थालेका छन् । संघीयताले कर्णालीको स्वास्थ्य समस्या केही हदसम्म भए पनि सुल्झाएको छ । यहाँका नागरिकले प्रदेश अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा पाउन थालेका छन् । नगर तथा गाउँपालिकासम्म स्टाफ नर्स, अहेव, अनमीलगायतका स्वास्थ्यकर्मीले सेवा दिइरहेका छन् । यद्यपि, कर्णालीका कतिपय अति विकट बस्तीमा भने यही तहको स्वास्थ्य सेवा पनि पाउन नसकिरहेको अवस्था विद्यमान छ ।
दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण हुन नसकिरहेका बेला नेपालजस्तो उल्पविकसित मुलुकमा यसले पार्न सक्ने प्रभाव के होला, सहजै आँकलन गर्न सकिन्छ । भारतमा संक्रमित बिरामी बढ्दो क्रममा रहेको समाचारहरू आइरहेका छन् । भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन थालेपछि रोजगारीका लागि त्यहाँ रहेकाहरू कर्णालीबासी धमाधम घर फर्किरहेका छन् । भारतसँग कर्णालीको सम्पर्क बढी हुने भएकाले पनि अन्य प्रदेशभन्दा कर्णाली बढी जोखिममा छ । कर्णाली सरकारले भारतबाट नेपाल भित्रिनेहरूलाई उच्च सतर्कता अपनाइ जाँचमा कडाई गरिनुपर्छ । प्रदेश सरकारले मातहतका निकायलाई निर्देशन दिन र हेल्थ डेस्कहरूको नियमित अनुगमन गर्न पनि उत्तिकै जरुरी देखिन्छ ।